Kahortaga Aafada iyo dib u bilaabida wax soo saarka-Company News-BURLEY
Darbiga Dayactirka & Rinjiyeynta
Qalabka Awoodda Guud
Ka hortagga aafada iyo dib u soo celinta wax soo saarka
Views:91 Qore: Tifatiraha Goobta Waqtiga Daabacaadda: 2020-02-05 Asal ahaan: Goob
Iyada oo laga jawaabayo aafada, shirkaddu waxay qaadatay tallaabooyin taxane ah si loo hubiyo ka hortagga cudurrada iyo xakameynta iyo dib u soo celinta wax soo saarka. Tan iyo markii dib loo bilaabay shaqadii Febraayo 17, shirkaddu waxay si adag u hirgelisay nidaamka ka hortagga iyo xakamaynta cudurrada. Marka lagu daro jeermiga jeermiska warshadda iyo baaritaanka heerkulka, waxay sidoo kale u dirtay shaqaale gaar ah inay iska diiwaangeliyaan albaabka warshadda, oo ay ku sameeyaan tijaabinta heerkulka iyo jeermiska gacmaha iyo cagaha ee shaqaalaha gelaya iyo kuwa ka baxaya si loo hubiyo kahortagga iyo xakamaynta aafada Meesha.
Burley wuxuu kaloo abaabulay dib u bilaabida shaqada si waafaqsan shuruudaha dowlada, si firfircoon ayuu ula xiriiray shaqaalaha, wuxuuna maareeyay dhamaan kaararka pass-ka ee shaqaalaha si looga caawiyo inay si habsami leh ugu laabtaan shirkadda. Isla mar ahaantaana, shaqaalaha shirkaddu waxay mushahar u qaataan si waafaqsan nidaamka shirkadda iyadoon loo eegin inay ku jiraan waajibaad iyo in ay ku jiraan cidlo. Shaqaalaha heeganka ah waxaa lasiiyay qol iyo boodh bilaash ah oo bilaash ah, waxaana laga badalay bariiskii hore ee la iibsan jiray iyo cuntada oo la galiyay sanaadiiqda, taas oo ay uruurin doonaan dhamaan aqoon isweydaarsiyada iyo waaxyaha.
Waqtigan xaadirka ah, tirada shaqaalaha ku soo laabanaya shirkadda ayaa gaartay 60%, inta badan aqoon isweydaarsi wax soo saar ayaa dib u bilaabay wax soo saar. Waxsoosaarka shirkaddu wuxuu inta badan ku saleysan yahay amarro la soo saaray ka hor inta aan la degdegin, waxaana la qiyaasayaa in awooddii wax soo saar ee hore dib loo soo celin doono ugu dambeyn Febraayo 25. Waqtiga soo socda, Shirkaddayadu waxay abaabuli doontaa wax soo saar iyadoo hubineysa nabadgelyada isla markaana wax badan ku biirin doonta horumarka bulshada.
Xiriir deg-deg ah
Kudar: Aagga Warshadaha Koonfur-bari, Shuxi Street, Degmada Wuyi, Zhejiang
Xuquuqda daabacaadda © 2021 Qalabka BURLEY Farsamada ee MEEALL